Idiploma yasimahla yesikolo esiphakamileyo kwi-Intanethi ngaphandle kweNdleko yaBantu abaDala ngo-15
Septemba 15, 2021 Eze uThadayo
Abantu abadala abafuna ukufumana idiploma ngaphandle kokuchitha imali kufuneka baqwalasele idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-intanethi ngaphandle kwendleko kubantu abadala abaxoxwe kule post yebhlog kunye namakhonkco afanelekileyo ukuze bafunde ngakumbi ngeminikelo yabo.
Uninzi lwabafundi alunakho ukugqiba isikolo esiphakamileyo ngenxa yezizathu ezininzi kodwa izizathu eziqhelekileyo kukungabikho kwemali, imiceli mngeni kwezempilo, okanye akusekho mdla ekufumaneni imfundo ngelixa abanye benokuba zizizathu zobuqu. Nokuba siyintoni na isizathu, kodwa ukuba ufuna ukubuyela umva, qhubeka, kwaye ugqibe kwisikolo esiphakamileyo eli nqaku liza kukukhokela kwaye ngeli xesha uyakonwabela ukukhwela ngokupheleleyo ukuze ufumane idiploma ongasayi kuchitha mali ukuyifumana .
Ngaphandle kokungasebenzisi imali yokufunda kunye nokufumana idiploma yamabanga aphakamileyo, enye into enomdla kukuba iiklasi zibanjwa kwi-Intanethi. Ngokuqinisekileyo awuzange ube namava ngeli xesha lakho njengomfundi kwisikolo samabanga aphakamileyo kodwa ngeli xesha uyakufumana uyolo lokufunda kwi-Intanethi kwaye ngokuqinisekileyo kuza nezibonelelo ezininzi.
Ngokungafaniyo nenkqubo yokufunda yesiNtu, awuzukuya nakweyiphi na imizimba, ubuso ngobuso, okanye iiklasi ezingaxhunyiwe kwi-intanethi ngaso nasiphi na isizathu, yonke imisebenzi, iinkqubo kunye neenkqubo ziya kwenziwa kwi-Intanethi. Oko kukuthi, uya kuthatha iiklasi zakho kwaye ufunde kwi-Intanethi kunye nokwenza izabelo, umsebenzi waseklasini, iimvavanyo, kunye neemviwo ezikwi-Intanethi. Ukufunda nge-Intanethi yimo yangoku kwindawo yokufunda kunye nesitayile sokufundisa nokufunda samva nje, kuya kufuneka ungene.
Ukuze uyazi ukuba inkqubela phambili yokufunda kwi-Intanethi kukho izikolo eziphakamileyo ezikwi-Intanethi ezamkelweyo kwaye ke zibonelela ngeziqinisekiso ezifanelekileyo. Iiyunivesithi ngokunjalo sele zisebenzise ukusetyenziswa kwe-intanethi ukubonelela ngeemfundiso kubafundi abakhokelela kwi-bachelor, master, kwaye, kwiimeko ezimbalwa kakhulu, izidanga zobugqirha.
Idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla ekwi-Intanethi- akukho ndleko kubantu abadala, incede ukusombulula nayiphi na imiba okanye izizathu ebeninazo malunga nokungasigqibi isikolo esiphakamileyo ngaphambili. Kulabo baceliweyo, abo badweliswe apha bakhululekile ngenxa yoko akusafuneki ukuba ubhatalele imfundo, kukho ezihlawulelweyo nangona zingadweliswanga kwaye kungaxoxwa ngazo apha.
Kulabo abanemicimbi yezempilo okanye abangakwaziyo ukugqiba amabanga aphakamileyo ngenxa yomceli mngeni ngokwasemzimbeni, idiploma yasimahla yamabanga aphakamileyo ekwi-intanethi ngaphandle kwendleko yabantu abadala ikuvumela ukuba uthathe iiklasi kwinduduzo yekhaya lakho okanye naphina apho ukulungele ngokwaneleyo. Izixhobo ozifunayo yikhompyuter esebenzayo okanye iPC kunye nonxibelelwano oluzinzileyo lwe-intanethi.
Kwaye okokugqibela, kwabo bangasayifumaniyo inkqubo yokufundisa ngokwesiko okanye isimbo sesikolo esiphakamileyo sinomdla kwaye kuye kwafuneka beyekile, idiploma yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi ngaphandle kwendleko yabantu abadala ibonakalisa indlela entsha, yanamhlanje, kunye nendlela yokufunda. Nokuba ungawaphi na la maqela abantu, uya ukonwabela ubhetyebhetye bokufunda kwi-Intanethi, Oko kukuthi, ungaqhubeka nolunye uxanduva ngelixa ugqibezela idiploma yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi.
Kwakhona, nokuba ungowuphi na isigaba owela kuso, eyona njongo iphambili yokupapasha lo mxholo kukunceda ukulungiselela abo bangenayo idiploma yamabanga aphakamileyo okanye isatifikethi.
Ngaphambi kokuntywila kumxholo ophambili, unokufuna ukusebenzisa itafile yomxholo ongezantsi ukuhamba ngokulula nangokukhawuleza kwinqaku.
1 Yintoni iDiploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo?
2 Ngubani onokufaka isicelo sediploma yamabanga aphakamileyo kwi-Intanethi?
3 Ndingawufumana umsebenzi ngediploma yamabanga aphakamileyo ekwi-intanethi?
4 Ndingafumana malini ngediploma yamabanga aphakamileyo?
5 Iimfuneko zediploma yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi
6 Ungasifaka njani isicelo seDiploma yeSikolo esiphakamileyo kwi-Intanethi
7 Idiploma yasimahla yamabanga aphakamileyo kwi-Intanethi-Akukho ndleko yaBantu abaDala
7.1 1. UPenn Foster
7.2 2. IAlabama Virtual Academy
7.3 3. Ithemba Isikolo samabanga aphakamileyo
7.4 4. Izikolo zasePinacle Charter
7.5 5. Umsebenzi weSmart Horizons Career kwi-Intanethi
7.6 6. Isikolo seKeystone
7.7 7. Isikolo seTexas seMpumelelo
7.8 8. Isikolo sam esibonakalayo
7.9 9. Isikolo iMiddleton
7.10 10. Isikolo samabanga aphakamileyo iOrion
7.11 11. Isikolo iWhitmore
7.12 12. Isikolo samabanga aphakamileyo iFranklin Virtual
7.13 13. IDiploma yabadala yeYunivesithi yaseBrigham
7.14 14. ISikolo samaBanga aPhakamileyo saseLiberty
7.15 15. IZiko leMntla Dakota leMfundo ekumgama (NDCDE)
8 I-FAQs kwiDiploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo simahla kwiNdleko ngaphandle kwaBantu abaDala
Yintoni iDiploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo?
Idiploma yamabanga aphakamileyo sisiqinisekiso sokushiya isikolo esinikwa isidanga samabanga aphakamileyo afunyenwe emva kwekhosi yokufunda eqhubeka iminyaka emine, ukusuka kwibanga le-9 ukuya kwele-12 egcwalisa zonke iimfuno zemfundo zesikolo sakho, isithili, isixeko kunye nelizwe.
Ngubani onokufaka isicelo sediploma yamabanga aphakamileyo kwi-Intanethi?
Abantu abadala, kunye nolutsha, abangakwazanga ukugqiba isikolo esiphakamileyo ngesizathu esithile, banokufaka isicelo sediploma yamabanga aphakamileyo kwi-Intanethi.
Ndingawufumana umsebenzi ngediploma yamabanga aphakamileyo ekwi-intanethi?
Ewe unokuqeshwa ngediploma yamabanga aphakamileyo ekwi-Intanethi ukuba nje uyifumene kwisikolo samabanga aphakamileyo esivunyelweyo, uninzi lwazo kuxoxwe ngalo kweli nqaku.
Ndingafumana malini ngediploma yamabanga aphakamileyo?
Ngediploma yamabanga aphakamileyo unokufumana i-avareji ye- $ 746 ngeveki okanye i- $ 38,792 ngonyaka.
Iimfuneko zediploma yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi
Iimfuneko zediploma yamabanga aphakamileyo kwi-Intanethi ziintanethi ezinzileyo kunye nekhompyuter.
Ungasifaka njani isicelo seDiploma yeSikolo esiphakamileyo kwi-Intanethi
Ukufaka isicelo sediploma yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi kulula kwaye apha ngezantsi ngamanyathelo endlela yokwenza ngayo:
Fumana ingxelo ebhaliweyo esemthethweni kwisikolo sakho samabanga aphakamileyo
Faka isicelo kwisikolo esiphakamileyo esikhethiweyo
Fumana i-ID yakho yomfundi kwaye ugqibezele ukuqhelaniswa ne-Intanethi
Emva kokugqiba ukuqhelaniswa, dibana nomcebisi
Qalisa izifundo zakho kwaye ufumane idiploma yamabanga aphakamileyo ekwi-intanethi
Uluhlu oludwelisiweyo kwaye kuxoxwe ngalo apha ngezantsi yidiploma yasimahla yamabanga aphezulu ngaphandle kwendleko yabantu abadala, kufuneka uhambe nje kuzo, ukhethe isikolo osikhethileyo, kwaye ulandele amanyathelo angentla apha ukuze uqalise kwaye ugqibezele idiploma yamabanga aphakamileyo kwangoko
Idiploma yasimahla yamabanga aphakamileyo kwi-Intanethi-Akukho ndleko yaBantu abaDala
Nantsi idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla ye-15 ekwi-intanethi ngaphandle kwendleko zabantu abadala, amakhonkco kwiwebhusayithi kwisikolo ngasinye abonelelwe ukuba ujonge ngakumbi malunga nesikolo.
IAlabama Virtual Academy
Ithemba Isikolo samabanga aphakamileyo
Izikolo zePinacle Charter
I-Smart Horizons Career School High School
Isikolo seTexas seMpumelelo
Isikolo sam esibonakalayo
Isikolo samabanga aphakamileyo iOrion
IFranklin Virtual High School
Idiploma yabadala yeYunivesithi yaseBrigham
Isikolo samaBanga aPhakamileyo saseLiberty
IZiko laseNyakatho Dakota leMfundo ekumgama (i-NDCDE)
1. UPenn Foster
Le yenye yeediploma zasimahla zamabanga aphakamileyo ezili-15 ezikwi-intanethi ngaphandle kweendleko zabafundi, ikharityhulam yalapha iyonke zizifundo ezingama-21. Abafundi bakhetha ukukhetha ezintlanu ukusuka kwizikhetho zemfundo, njengoncwadi kunye ne-algebra ukuya kwizikhetho zemisebenzi ezinje ngombane kunye nokuchwela.
UPenn Foster uza kuphuhlisa izakhono zakho ezisebenzayo ukukunceda kwindlela yakho yengqesho. Zonke izifundo zenziwa kwi-Intanethi, kunye nokunikezelwa, iimvavanyo kunye neemviwo. Uyakufumana isiqinisekiso esamkelweyo njengoko isikolo sivunywa yi-AdvancED kunye noMbutho weeKholeji kunye neZikolo zeKhomishini yeZikolo eziziiSekondari zoMbuso ophakathi.
2. IAlabama Virtual Academy
Xa ubhalisa kwesi sikolo sikwi-intanethi sikwi-intanethi, uya kuba nakho ukufikelela kumava emfundo akumgangatho wehlabathi aya kukunceda ufikelele kwizakhono zakho xa ufunda. Banikezela abafundi ngamava emfundo asimahla, akumgangatho ophezulu ngelixa bexhasa imisebenzi yabo yezentlalo neyangaphandle.
IAlabama Virtual Academy sesinye sezikolo eziphakamileyo zasimahla ezikwi-Intanethi ngaphandle kwendleko kubantu abadala kwaye ivula izidanga kuludwe lwamathuba. Unokuthatha isigqibo sokungena kubasebenzi kwaye uqale ukusebenza okanye uqhubeke nezifundo zakho ngokuqhubekayo kwikholeji yeminyaka emine okanye eyunivesithi.
3. Ithemba Isikolo samabanga aphakamileyo
Esi sesinye sezikolo eziphakamileyo zasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko zabantu abadala kwaye simahla kuphela kubafundi baseArizona High School abangaphantsi kweminyaka engama-22 ubudala. Iikhosi zigcinwe ngokupheleleyo kwi-Intanethi kwaye zinemiyalelo esekwe kwividiyo, iimvavanyo ezikwi-Intanethi, imibuzo, amanqaku e-Intanethi kunye nemisebenzi. Isikolo samabanga aphakamileyo samkelwe ngeCognia, esisigunyaziso esisemthethweni, ke isiqinisekiso sakho sediploma samkelwe ngokulinganayo.
I-Visit Iwebhusayithi yeSikolo
4. Izikolo zasePinacle Charter
Izikolo zePinnacle Charter liqela lezikolo ezingahlawulelwayo, izikolo zikarhulumente ezivunyiweyo eArizona ezibonelela ngemfundo kubafundi abakumaBakala 6-12. Izikolo ezikwi-Intanethi zibonelela ngamathuba abafundi ukuba bafumane iimfuno ezifanelekileyo zemfundo.
5. Umsebenzi weSmart Horizons Career kwiSikolo samabanga aphakamileyo
Esi sikolo siyinxalenye ye-Smart Horizons Career Online Education, iqonga elenzelwe ukunceda abantu abadala kunye nolutsha oludala ngaphandle apho bengenayo idiploma yamabanga aphakamileyo. Isikolo samabanga aphakamileyo sinikezela ngediploma yesikolo esiphakamileyo esemthethweni kwi-intanethi ngaphandle kwendleko kubantu abadala abanotitshala abanelayisensi kurhulumente ababonelela ngenkuthazo ebanzi kunye nenkxaso kubafundi.
Inkqubo yokuthenga ngetyala yikhredithi eyi-18 kwaye iikhredithi zokudlulisa zamkelwe ukuya kuthi ga kwizifundo ze-14. Ekupheleni kwenkqubo, abafundi baya kunikwa isatifikethi sediploma abanokusisebenzisa ukukhusela imisebenzi yokungena kwinqanaba elifana nomphathi weofisi, ukhathalelo lwabantwana, kunye nokufundisa, okanye ukuya kwiikholeji.
6. Isikolo seKeystone
Isikolo saseKeystone sesinye idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko kubantu abadala, abafundi banokukhetha kwiindlela ezahlukeneyo zemfundo ukufezekisa iinjongo zabo. Ayinamsebenzi ukuba ufuna ukufunda ngokusisigxina okanye ufuna nje izifundo ezizodwa. Njengomntu omdala, unokukhetha ukufumana idiploma yamabanga aphakamileyo okanye ufunde izakhono ezitsha zokuqhubela phambili nomsebenzi wakho kwaye ungabhalisa nangaliphi na ixesha.
Ngaphaya koko, i-Keystone ivunyiwe yi-AdvancEd kunye neBhodi yePhondo yasePennsylvania yeZikolo eziNikwe iiLayisenisi zaBucala, kunye ne-Commonwealth yasePennsylvania. Le yimibutho yokuvunywa ngokusemthethweni kwaye ngokuqinisekileyo uya kufumana idiploma eqinisekisiweyo.
7. Isikolo seTexas seMpumelelo
Le yenye yeediploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko yabantu abadala eseArlington, eTexas kwaye yamkelwe yiArhente yezeMfundo yaseTexas kunye neAdvanced. Njengomfundi omdala eTSA ulandela idiploma ekwi-Intanethi, uya kufumana iiklasi ngaxeshanye kwaye usebenze ngesantya sakho.
Izifundo ezikhoyo onokuthi uthathe isigqibo sokuzifunda kulawulo lolwazi lweshishini, ulawulo lweshishini, itekhnoloji yombane, intshayelelo kubalo-mali, kunye netekhnoloji yokufaka imibhobho yamanzi phakathi kwabanye.
8. Isikolo sam esibonakalayo
Isikolo sam esisebenza ngokugqibeleleyo sisikolo sasimahla esine-intanethi esijolise kumabanga K-12 kubahlali baseMichigan ukubabonelela ngeendlela zokufunda eziguqukayo eziphuhlisiweyo ukwanelisa iimfuno zabafundi. Ukusebenzisana nezikolo zikarhulumente eMichigan, i-academy incede amawaka abantu abadala kunye nolutsha oludala ukuba bafumane idiploma yamabanga aphakamileyo.
Kukho iinkqubo ezisisigxina kunye nezesingxungxo kwi-intanethi kwaye unokukhetha efanelekileyo ngokufanelekileyo. Ubhaliso lwazo naziphi na iinkqubo unyaka wonke, oko kukuthi, unokufaka isicelo sediploma ekwi-Intanethi yabantu abadala nanini na ukulungele.
9. Isikolo iMiddleton
Ukwamkelwa yiCognia kwaye kuqhutywa yiCatapult Learning, Inc., iMiddleton Academy yenye yeediploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko zabantu abadala. Ikharityhulam entsha enikezela ngendlela ekwi-intanethi kunye nejolise kubafundi kwimfundo yenza ukuba i-academy ibe yindawo elungileyo yabantu abadala yokufumana isiqinisekiso sediploma kwi-intanethi.
10. Isikolo samabanga aphakamileyo iOrion
Isikolo samabanga aphakamileyo iOrion sesinye sediploma yasimahla yamabanga aphakamileyo ekwi-intanethi ngaphandle kwendleko kubantu abadala, samkelwe nguMbutho Wabafundisi-ntsapho abangamaKristu kunye neZikolo (IMITHETHO), kunye noMbutho waseMzantsi weeKholeji kunye neBhunga leZikolo kuQinisekiso noPhuculo lweSikolo (oluhambelana kunye neCognia). Zombini i-Cognia kunye ne-ACTS kwaye zamkelwe yiKhomishini yase-Texas yangasese yokuVunywa kweZikolo.
Kukho iikhosi ezingaphezu kwama-200 onokukhetha kuzo, ukusuka kwizifundo ezizimeleyo zokufunda ukuya kwi-AP kunye nokukhethwa kwamatyala amabini, kukho ikhosi kuye wonke umfundi, nokuba mdala okanye ulutsha. Umsebenzi osisigxina okanye ongesosigxina, iOrion yaphuhliswa kwaye iqhutywa ngootitshala abanamava abazinikele ekuxhaseni umfundi ngamnye ukuba afumane iziphumo eziyimpumelelo.
Ngapha koko, iOrion inika abafundi izakhono abazidingayo ukuze bafezekise iinjongo zabo ezizodwa kunye nokugqwesa emva kokuphumelela isidanga kwikholeji, kwisikolo sezorhwebo, emkhosini, kwezobugcisa, kwezemidlalo nakwezabasebenzi. Ungabhalisa kwinkqubo yediploma yexesha elizeleyo okanye yexeshana.
Idiploma yamabanga aphakamileyo yabantu abadala e-Orion ixhobisa abafundi ngezakhono eziyimfuneko kubo ukuze bafezekise iinjongo zabo kunye nokugqwesa emva kokuthweswa isidanga njengekholeji, kwisikolo sezorhwebo, emkhosini, kwezobugcisa, kwezemidlalo nakwezabasebenzi.
11. Isikolo iWhitmore
Isikolo saseWhitmore sesinye sediploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko yabantu abadala eyamkela abafundi unyaka wonke. Ubhaliso lweenyanga ezili-12 ezipheleleyo ukuqala ngomhla wokubhaliswa komfundi. Kwaye abafundi bayaphumelela nangaliphi na ixesha lonyaka bakugqiba iimfuno zokuthweswa isidanga.
Xa kuziwa kwindawo yokufunda, iSikolo i-Whitmore sizabalazela ukwenza enye exhasayo, ecela umngeni kunye neyodwa. Ukuthatha inxaxheba kwimfundo yabo kuyakhuthazwa, kuvumela abafundi ukuba baphuhlise izakhono ezinje ngokuzikhokela kunye nokuzithemba, kunye nolawulo lwexesha kunye nezakhono zokucinga ezinokubenza baqhubeke nokusebenza, imfundo ephezulu, okanye naphina apho ubomi bubahambisa khona.
12. Isikolo samabanga aphakamileyo iFranklin Virtual
Ikhaya lelona gumbi lokufundela, kwaye iFranklin Virtual High School ibonelela ngezifundo ezinokugqitywa kwintuthuzelo yekhaya lakho. Ineeofisi eTallahassee, eFlorida, naseScottsdale, eArizona. Ngaphandle kwalonto, banelayisensi kwi-AdvancED kunye ne-DEAC, ngokunjalo.
Inkqubo yokuhanjiswa kwe-Intanethi kwisikolo samabanga aphakamileyo iFranklin inokuphucula ukufundiswa kwakho eklasini. Abantwana, ulutsha kunye nabantu abadala ngokufanayo banokubhalisa esikolweni. Inkqubela yakho iya kulandelwa kuyo yonke ikhosi, kwaye kuya kubonelelwa ngezixhobo ezongezelelweyo, kubandakanya ukufundisa kunye nokulandela.
Kulula ukuhamba kwaye zibonelela ngemisebenzi ebandakanya ukukhuthaza ukuba uqhubeke nophando lwakho emva kokugqiba ikhosi. Indawo eguqukayo iyagcinwa, kwaye iikhosi zinokufikeleleka nangaliphi na ixesha. Le yenye yediploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko kubantu abadala eya kuthi ibanike izakhono kunye nezixhobo abazifunayo ukuze baphumelele kwihlabathi langaphandle.
13. IDiploma yabadala yeYunivesithi yaseBrigham
IYunivesithi yase-Utah yaseBrigham Young isekwe eProvo kwaye yamkelwe yi-AdvancED. I-BYU yasekwa, yaxhaswa, kwaye yakhokelwa kwimishini yayo yiCawa likaYesu Krestu waNamhlanje-ye-Saints (LDS), enceda abantu kwimfuno yabo yokugqibelela kunye nobomi obungunaphakade.
Ukwenza ukuba kube lula ngakumbi kubafundi abavela kulo lonke ilizwe, bakwabonelela ngesifundo sasimahla, ebavumela ukuba bathathe uvavanyo lwesikolo esiphakamileyo besebenzisa iifowuni, iipilisi, okanye iiPC. Abafundi banokubonelela ngezifundo kwiShishini, uBunjineli, iMfundo, ubuGcisa boNxibelelwano kunye noNxibelelwano, uLuntu, kunye noFundo lwaMazwe ngaMazwe kunye neNdawo, phakathi kwezinye iindidi zokufunda.
Ngapha koko, iziko libonelela ngediploma yamabanga aphakamileyo ekwi-intanethi yabantu abadala kwaye iza ngaphandle kweendleko. Banokubonelela naziphi na iikhosi ezingentla kunye nemisebenzi ekhuselekileyo kwizikhundla zokungena kwinqanaba okanye baqhubeke nesidanga seminyaka emine.
14. ISikolo samaBanga aPhakamileyo saseLiberty
ISikolo samaBanga aPhakamileyo saseLiberty sesinye sediploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko zabantu abadala abasafumana idiploma yamabanga aphakamileyo ngaphandle kwendleko zabantu abadala. Isekwe eBrattleboro, eVermont kodwa ibonelela ngeeklasi ezikwi-Intanethi ezikhokelela kwidiploma. Inkqubo ivulelwe kuphela abantu abadala abaneminyaka eli-18 nangaphezulu, kwaye yenzelwe ukunceda abafundi ukuba bagqibe imfundo yabo yamabanga aphakamileyo
Iikhosi ezifundiswayo zingesiNgesi, iMathematika, kunye neziFundo zoLuntu ngabafundi ababhalisayo. Kukho iikhosi zesayensi kunye nezifundo zokuhlola ezifumanekayo kuwe zokwakha izakhono ezinokukhahlela ukuqala ikhondo kubasebenzi bakho.
15. IZiko leMntla Dakota leMfundo ekumgama (NDCDE)
Kuluhlu lwethu lokugqibela lwediploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-intanethi ngaphandle kweendleko zabantu abadala yi-NCDCE, sisikolo esivunyiweyo, semfundo esemgama ebonelela ngamathuba emfundo kubafundi naphina emhlabeni. Ufuna kuphela uqhagamshelo oluzinzileyo lwe-intanethi kunye nePC esebenzayo ukuze ujoyine inkqubo yediploma yabantu abadala kwaye ufumane isatifikethi esinokukufumanela umsebenzi ongcono kakhulu.
Eliziko lizinze eFargo, ND, kwaye lamkelwe yi-AdvancED. Abafundi banokubonelela ngezifundo kwiKholeji yezeMpilo, iMfundo yobuGcisa, iMfundo yeKhompyuter, iMfundo yeShishini, uSapho, kunye neNzululwazi yabaThengi, iMfundo yePhysical and Health, iMathematics, iAerospace, kunye nezinye ezininzi.
Ezi ziidiploma zasimahla zamabanga aphakamileyo ezili-15 ezikwi-intanethi ngaphandle kwendleko kubantu abadala, khetha nasiphi na isikolo ekubhenela kuwe kwaye uqalise uhambo lokugqiba isikolo esiphakamileyo kwaye ufumane idiploma.
I-FAQs kwiDiploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo simahla kwiNdleko ngaphandle kwaBantu abaDala
Ngaba ndingayifumana idiploma yam yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi?
Ukufumana idiploma yamabanga aphakamileyo kwi-Intanethi kulula, kwaye ewe, ungayifumana kwi-Intanethi
Ixabisa malini ukufumana idiploma yamabanga aphakamileyo kwi-Intanethi?
Iindleko zokufumana idiploma yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi phakathi kwe- $ 5,495 ukuya kwi- $ 8,495
Yeyiphi eyona nkqubo yesikolo esiphakamileyo yediploma yabantu abadala?
Esona diploma sisiphakamileyo esikwi-intanethi sabantu abadala sisikolo esiphakamileyo se-Excel.
I-Diploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo esi-15 esiVunyelweyo kwi-Intanethi
Ungalufumana njani ulwamkelo kwiStanford Online Masters
Izikolo eziPhakamileyo ezi-13 eCanada
Iikhosi ze-11 zeDiploma ezingabizi kakhulu eCanada zaBafundi beZizwe ngezizwe
I-10 yeekhosi zokuBhala zaSimahla kwi-Intanethi zaBabhali abatsha
I-16 yeDiploma ePhambili yokuPhumelela kuFundo lokuFunda
Iikhosi ze-15 zeYale zasimahla kwi-Intanethi zaBafundi kunye nabaSebenzi
Iikhosi ze-Intanethi Izikolo zokuFundisa Simahla Funda iSakhono kwi-Intanethi izifundo zekhompyutha funda kwi-intanethi
idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko zabantu abadalaidiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko zabantu abadala
Post Previous:Ungasibhala njani isincoko esifanelekileyo kwiYunivesithi
Okulandelayo Post:Imisebenzi ephezulu eli-13 engeyiyo eyoMzimba ehlawula kakuhle